जहाँ पेरिस मा रहन | सडकको लागि एक जोडी
सेप्टेम्बर 4, 2019 / एक टिप्पणी छोड
पेरिस विश्वको सबैभन्दा लोकप्रिय पर्यटन गन्तव्यको रूपमा रहन्छ, जहाँ पेरिसमा बस्न चाहनेहरूको लागि दुविधा पैदा गर्दछ। सब भन्दा लोकप्रिय क्षेत्रहरू हो, राम्रो, लोकप्रिय, र सबै भन्दा राम्रो क्षेत्रहरू र शहर मा होटल सस्तोमा आउँदैनन्। जे होस्, त्यहाँ पेरिस मा रहन धेरै अपील क्षेत्रहरु छन्, र उपलब्ध विकल्प को राशि संग तपाईं पर्याप्त तयारी संग रहन को लागी एक राम्रो ठाउँ पाउन सक्नुहुन्छ।
शहर, नै, 20 खण्डहरु मा विभाजित छ arrondisements, जो क्षेत्र अनिवार्य शहर को उप-डिभिजनहरु कि वास्तव मा केन्द्रीय पेरिस को अनौंठो "पड़ोस" मान्न सकिन्छ। हामी यी व्यक्तिगत arrondissements मा एक नजर राख्नेछौं, र पछाडि रहनको लागि उत्तम ठाँउ कहाँ हुन सक्छ निर्णय गर्न मद्दत गर्न प्रत्येक उचाई र तलहरू के भत्काउँछन्।
नक्शा - पेरिसको उत्तम क्षेत्र, होटलहरू, र गन्तव्यहरू
पेरिस मध्य भन्दा करीव यसको विभाजन गरिएको एक सबैभन्दा प्रसिद्ध शारीरिक सुविधाहरू द्वारा विभाजित गरिएको छ - सीइन नदी। पेरिस ठूलोमा, धेरै जसो धेरै यूरोपीय नदी शहरहरू जस्तै, दुई ठूला क्षेत्रहरूमा विभाजित गरिएको छ जुन अर्को टुक्रिएको छ। पेरिसमा, यी दुई क्षेत्रहरू छन् - दायाँ बैंक (Rive Droite भनिन्छ) र बायाँ बैंक (Rive Gauche)।
पेरिसको सीन नदी
दायाँ बैंक दुई उप-क्षेत्रहरु मध्येको ठूलो छ, र शहर को 14 arrondissements को 20 समावेश गर्दछ - सबै 5th-7th, र 13th-15th arrondissement बाहेक।
थप उप-विभाजन गर्ने पेरिसको arrondissements, वा क्वाटरिहरु, यिनीहरूलाई पनि भनिन्छ, हामी arrondissement को तीन समूह अवलोकन गर्दछौं तिनीहरूसँग उप-सुविधाहरूको समान सेटको स्वामित्वमा।
पेरिसमा कता बस्ने भन्ने बारेमा विचार गर्दा, एउटा सरल मार्गनिर्देशनले यो थाहा पाउँदछ कि थोरै एर्रोन्डिसेमेन्ट संख्या कम हुने सम्भावना बढी हुन्छ, यो सानो शहरको छेउछाउमा रहेको छ जुन अझ शहरको केन्द्रमा रहेको छ। यी समूहहरू 1st - 6th हो, जुन पेरिसको सबैभन्दा केन्द्रीय, सानो र सब भन्दा पुरानो हो, साथ साथै दुई अन्य समूहहरू (7th - 12th र 13th - 20th) जुन आकारमा बढ्छ र उमेरमा घट्दै जाँदा तपाईं अगाडि बढ्दै जानुहुन्छ। शहर केन्द्र।
पेरिसको कुनै पनि नक्शा हेर्नुहोस्, र 1st Arrondissement बाट बिस्तार बिस्तारै बढेको एर्रोन्डिसेमेन्टहरू हेर्न सजिलो छ - जुन Ile de la Cite नजिकै सुरू हुन्छ। पेरिसको arrondissements को लेबलिंग हेर्न माथिको नक्शामा जुम आउट गर्न सक्नुहुन्छ।
पेरिस Arrondissements - एक सिंहावलोकन
पेरिसको अरनडिसेमेन्ट सबैको आ-आफ्नै विशिष्ट चरित्र छ, र यो ती चीजहरू मध्ये एक हो जुन बारम्बार पेरिस आउने आगन्तुकहरूलाई उनीहरूले शहरलाई यति धेरै प्रेम गर्ने एक कारणको रूपमा उल्लेख गर्छन्। मानिसहरू पेरिसमा हुँदा उनीहरू एक वा केही arrondissement संग प्रेम मा पर्दछन्, र पेरिस तिनीहरूलाई कि arrondissement हुन्छ। यो आफ्नै शहर जस्तो हो, र यो आकर्षणको अंश हो जुन पेरिसमा रहनको साथ आउँदछ।
पेरिसका सबै एरन्डिसेसेमेन्टहरू छुट्टीमा हुँदा यो हेर्न गाह्रो हुने बेलामा, तपाईले यस सल्लाहकारलाई सबैभन्दा धेरै दिइएको सल्लाह दिनुहुने साधारण अप्ठ्यारो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाईंलाई आफ्नै लागि योजना सामान्यीकरण गर्न मद्दत गर्दछ जसले पेरिसमा तपाईं बस्न चाहानुहुन्छ भन्ने कुराको मद्दत गर्दछ।
केन्द्रीय पेरिस र सांस्कृतिक हार्ट - 1st र 2nd Arrondissements
1st र 2nd Arrondissements पेरिसको हितोपदेशिक हृदय हो - क्रान्तिहरूको स्थान, कलात्मक महारत, रोयल्टी, र - अवश्य पनि, इतिहास। यो जहाँ पेरिस धेरै आगन्तुकहरु शहर मा आफ्नो बाटो को लागी काम शुरू, र जहाँ तपाईं पनि शुरू हुन सक्छ।
गर्नुपर्ने कामहरू: संग्रहालय लुभ्रे, जेउ डि पॉमे, बासिलिक नोट्रे-डेम डेस भिक्टोर्स, कारउसेल डु लुभ्रे
सर्वश्रेष्ठ होटल: 1st र 2nd Arrondissements ले तपाईंलाई सामान्य रूपमा चलाउनेछ $ 150-200 USD प्रति Nigh, जुन तपाईंको औंलाको टुप्पामा भएको स्थान विचार गर्दा खराब छैन। यी क्षेत्रका लागि हाम्रा शीर्ष पिकहरू हुन्
होटल मोलिरे - उच्च-अन्त, night 175 र night 225 USD प्रति रातमा। उत्तम कुरा? योसँग उत्कृष्ट आरामदायक कोठा र ओछ्यानको साथ एक उत्कृष्ट सौना र हम्माम छ।
क्यास्टेल पेरिस - प्रति रात $ 225 र $ 250 अमेरिकी डलरको बीचबाट शुरू गर्दै, क्यासिल पेरिसको मुटुमा दाहिने सुन्दर मूल्य हो।
होटेल ले प्राडी - कुनै रात लगभग $ 175 अमेरीकी डलर प्रति रात बार्गेन, तर समीक्षा उत्कृष्ट छ र होटल ले प्राडी सडक तह तल एक उत्कृष्ट साइटमा रेस्टुरेन्टको साथ पूरा छ।
Le Marais - 3rd & 4th Arrondissements
पेरिस, फ्रान्स - मे 8, 2016। पेरिसको बोहेमियाई माराइस जिल्लामा रेस्टुरेन्टहरूको साथ एक शान्त सडक
पेरिसमा ले माराइज एक धेरै सुन्दर दृश्यहरू हुन् र कुनै समय फ्रान्सेली रोयल्टीको ईष्ट जिल्ला भएको थियो। यो आकर्षणले भरिएको छ, र यो ठाउँहरू मध्ये एक हो तपाईंले पेरिसमा हुँदा प्रशस्त समय खर्च गर्नुहुन्छ।
गर्नुपर्ने कामहरू: म्यूजे नेशनल पिकासो-पेरिस, ले मेरी सेलेस्टे, ले जार्डीन डु माराइस, प्लेस डी ला बास्टिल
सर्वश्रेष्ठ होटल: Le Marais एक अत्यधिक वांछनीय क्षेत्र हो, तर तपाइँ प्रति रात $ 200 USD अन्तर्गत महान होटलहरू पाउन सक्नुहुन्छ। पेरिसमा, त्यो ठूलो कुरा हो!
ले सामान्य होटल - मौसममा निर्भर गर्दै, प्रति रात $ 125 $ 175 सम्म। यो एउटा सानो, बुटीक, कुरकुरा होटेल हो जुन शहरको सब भन्दा राम्रो मान हो।
होटल डु हौट माराइस - एक उत्तम स्थान र एक ठूलो मूल्य - प्रति रात N 200 USD अन्तर्गत! यो सुपर हिप हो, र Le Marais को वास्तवमै ट्रेंडी सेक्सनमा।
पेरिस को टापु
सीनको बिचमा दुईवटा साना टापुहरू छन् जुन दुबै ऐतिहासिक र मनमोहक छन्। Ile de la Cite र Ile St Louis हो जहाँ तपाईं पेरिसमा राम्रा केफहरू र रेस्टुरेन्टहरू पनि भेट्टाउनुहुनेछ, र त्यहाँ आगन्तुकहरू छन्। निश्चित योजना बनाउनुहोस्!
गर्नुपर्ने कामहरू: क्याथेड्रल नोट्रे डेम डे पेरिस, प्लेस डोफिन, क्रिप्ट आर्कियोलोगिक डे लि'इले डि ला साइट, ग्यालरी दुट्को
सर्वश्रेष्ठ होटल: टापुहरूमा विकल्पहरू सीमित छन्, तर हामी वास्तवमै सिफारिस गर्छौं होटल डि लिली। यो ठाँउदार, सुन्दर छ, र लगभग $ 150 - N 175 अमरीकी डालरमा ठूलो मूल्य हो।
ल्याटिन क्वार्टर र सेन्ट Germain de Prés - 5th / 6th Arrondissement
ल्याटिन क्वार्टर पेरिसको सबैभन्दा लोकप्रिय arrondissement मध्ये एक हो, र केवल द्रुत हिड्नको कारणले तपाईंलाई बताउँदछ। यो ऐतिहासिक, व्यस्त, ऊर्जावान छ, र यस शहरको सब भन्दा उत्तम खाना छ। खाना बजारहरू पेरिसको सब भन्दा राम्रा मध्ये केही हुन्, र यसले शहरमा हुँदा तपाईले राम्रो ठाउँ पनि बनाउनुहुन्छ।
ल्याटिन क्वार्टर पेरिसको सबैभन्दा चर्चित जिल्ला र विश्वविद्यालयहरूको घर हुन सक्छ। वास्तवमा क्वार्टरको नाम त्यसबेलाको हो जब विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले बोल्ने भाषाहरू ल्याटिन नै थिए।
रोमन इतिहासको आधारमा बस्दै, ल्याटिन क्वार्टर पेरिसको विगतको भर्चुअल टाइम क्याप्सुल हो। यो त्यस्तो स्थान हो जुन अस्तित्वको आन्दोलनमा केन्द्रित थियो, र आज शहरमा सब भन्दा राम्रो (र सब भन्दा पुरानो) बगैंचा छ। निश्चित गर्नुहोस् कि Jardin du लक्जमबर्ग, जाँच बिना नै जाँच गर्नुहोस्!
गर्नुपर्ने कामहरू: पान्थेयन, ले जार्डिन डु लक्जमबर्ग, जार्डिन डे प्लानेट्स, लक्जमबर्ग प्यालेस
लेस बुलेस डे पेरिस - अद्भुत आर्ट डेको-बैठक - क्लासिक आधुनिक कोठाहरू जुन सिनमा अवस्थित छन्। $ 200 USD अन्तर्गत वर्षको प्रायः।
होटल Rive Gauche चयन गर्नुहोस् - सफा, लगभग स्क्यान्डिनेभियाई अनुभूति संग पातलो कोठा। जाडोको बखत, तपाईं यहाँ प्रति रात को कम $ 150 अमेरिकी डलरको लागि कोठाहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ।
एफिल टावर - 7th Arrondissement
7th पेरिसको लागि यति महत्त्वपूर्ण छ, र शहरको सब भन्दा प्रसिद्ध आइकनको लागि घर - एफिल टावर। थप रूपमा, यो एक संग्रहालय तातो ठाउँ हो, र Seine साथ चलाउँछ।
जबकि हामी यस क्षेत्रमा बस्नको व्यक्तिगत प्रशंसकहरू होइनौं किनकि यो हाम्रो लागि इमान्दारीसाथ अति व्यस्त छ, धेरै पर्यटकहरू पेरिसको जीवन्त रातको जीवनको आनन्द लिन्छन् र अन्धकार बाहिरका सडकहरूको निरन्तर धड्कन दिन्छन्।
गर्नुपर्ने कामहरू: एफिल टावर, रोडिन संग्रहालय, द आर्मी म्यूजियम, ओरसा संग्रहालय
सर्वश्रेष्ठ होटल: मा रहनुहोस् पुलम्यान पेरिस टूर एफिल। तपाईं एक लक्जरी अनुभव र शहर मा सबै भन्दा राम्रो संभव रात को दृश्य पाउनुहुनेछ एफिल टावर तपाईं मा फिर्ता स्टारिंग साथ!
Champs Elysées - 8th Arrondissement
शपिंग - यो चैम्प्स एलिसीसको बारेमा जान्न मुख्य कुरा हो। यो अर्क डी ट्रिम्फेको डेड-एंड हो, र प्ले प्लेस डे ला कोन्कोर्डेबाट सुरु हुन्छ, जुन दुबै आईटमहरू हुन् जुन तपाईंको पेरिसमा "गर्नुपर्ने कार्य" सूचीमा हुनुपर्दछ।
8th एक स्थान हो जुन शपिंगको कारण केही अपील गर्दछ किनकि विश्व कीर्तिमानी पसलहरूले यस ग्लिजी र ग्लैमरस रोडवे लाईन गर्छन्। एउटा टिप, यद्यपि - चैम्प्स इलिसीमा ड्राइभ नगर्नुहोस्। यातायात पागल छ, र यदि तपाईं शहर मा ड्राइविंग को अनुभव छैन भने यो एक रमाईलो अनुभव छैन।
गर्नुपर्ने कामहरू: Champs Elysees, प्लेस डे ला कोन्कोर्ड, Champs Elysees Garden
सर्वश्रेष्ठ होटल:सबै भन्दा राम्रो मूल्य मा सबै भन्दा राम्रो होटल? कुनै प्रश्न छैन - सुन्दर प्रयास गर्नुहोस् होटल ब्रैडफोर्ड एलिसीस।
पेरिस ओपेरा - 9th Arrondissement
यहाँको केन्द्रीय भाग प्यालास गार्नियर, पेरिसको 19th शताब्दीका ओपेरा हाउस हो जुन शहरको संरचनाहरूको सब भन्दा सुन्दर छ। त्यहाँ ग्यालरीहरु Lafayette मा राम्रो शपिंग, र 9th arrondissement मा रेस्तरां को धेरै छ।
गर्नुपर्ने कामहरू: पलाइस गार्नियर, ग्रान्ड म्यागासिन्स, ग्यालरी लाफेयेट
सर्वश्रेष्ठ होटल: यो पेरिसमा बस्नको लागि हाम्रो मनपर्ने क्षेत्र होइन, तर यदि तपाईंसँग खरिद र सार्वजनिक यातायातको कारण तपाईंको सूचीमा यो स्थान छ भने, सँग जानुहोस्। होटल सेन्ट-मार्क। यो 9th arrondissement मा धेरै भन्दा होटल भन्दा एक सानो pricier छ, तर यसको लायक!
10th Arrondissement - ट्रेन स्टेशन
तपाईं पेरिसमा 10th arrondissement को माध्यम बाट प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ, तर यहाँ बस्नुहुन्न।
जबकि Jardin Villemin राम्रो छ, यो शायद मात्र उल्लेखनीय आकर्षण हो कि हेर्न लायक। त्योसँग पनि, त्यहाँ पेरिसमा प्रशस्त बगैंचाहरू छन्। यो क्षेत्र, एकदम स्पष्टसँग, रातमा धेरै खतरनाक र unnerving हुन सक्छ।
क्याब भित्र वा क्याब बाहिर, तर यहाँ नजानुहोस्।
गर्नुपर्ने कामहरू: Gare du Nord, Gare de L'Est, Jardin Villemin
नहर सेन्ट-मार्टिन र 11th Arrondissement
11th arrondissement एक विचारमा रहेको हुन सक्छ यदि तपाईं बजेटमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने। यो धेरै क्याफे र ट्रेन्डी रेस्टुरेन्टहरूको साथ एक जवान क्षेत्र हो, र सीन नदीमा सिधा पहुँच दिन्छ।
एक महान दिन-भ्रमण, नहर सेन्ट-मार्टिनको धेरै राम्रा बजार र धेरै उत्तम खाना छ।
गर्नुपर्ने कामहरू: क्याफे डे ला डान्से, अटेलर देस लुमिरेस
12th arrondissement मा त्यहाँ धेरै कुरा छ, जुन पेरिसको 20 आधिकारिक arrondissement को सब भन्दा ठूलो हो।
यो पेरिसमा रहँदा यो बस्नको लागि राम्रो ठाउँ हो, र त्यहाँ केहि राम्रो चीजहरू छन् जसमा बर्सी गाउँ, ओपेरा बास्टिल, एलिग्रे बजार, र अन्य धेरै समावेश छ। यो एक उत्तम ठाउँ मध्ये एक टहल लिन र एक महान रेस्टुरेन्ट मा हराउन।
गर्नुपर्ने कामहरू: बोइस डि भिन्स्नेस, चाटेउ डि भिन्स्नेस, अलिग्रे मार्केट, बर्सी गाउँ
वास्तवमै धेरै समय खर्च गर्नु भन्दा यसमा रहनु नै 13th भन्दा राम्रो हुन्छ, किनकि त्यहाँ वास्तवमै गर्नुपर्ने धेरै चीजहरू छैनन्। यो arrondissement केहि अधिक आवासीय हो, तर यो एक राम्रो, उच्च-डलर क्षेत्र हो जहाँ धेरै आधुनिक भवनहरू छन् जसले सुरक्षित र विलक्षण महसुस गर्दछ - तर पनी यो रोमांचक वा विशिष्ट पेरिसियन होईन।
गर्नुपर्ने कामहरू: राम्रो क्याफे, विचित्र होटलहरू
पेरिस Catacombs मा खोपडी र हड्डीहरु
140,000 पेरिसियन्स यस दक्षिणी जिल्ला को आकर्षण को बारे मा गलत हुन सक्दैन। त्यो हो कति जना प्रत्यक्ष, काम, किनमेल, र 14th Arrondissement मा खेल्न। यद्यपि यात्रुहरूका भ्रमण स्थानहरूको सूचीमा सामान्य छैन, हामी फेला पार्छौं 14th को बारेमा मनपर्ने धेरै - यी बाह्र सुझावहरू सहित।
क्याटाकम्बहरू तपाईको 14th मा आउनुको मुख्य कारण हो जुन तपाईले भ्रमण गरिरहनु भएको हो, तर रहनको लागि यो साँच्चिकै राम्रो ठाउँ हो। यो न्यानो, आमन्त्रित गर्ने, सफा arrondissement को एक हो, र एक धेरै परिवार केन्द्रित arrondissement को धेरै।
गर्नुपर्ने कामहरू: पेरिसको Catacombs
Vaugirard - 15th Arrondissement
त्यहाँ पसलहरू भउगिरार्ड वरिपरिका साना होटलहरू छन्, र साथै पेरिसको हाम्रो मनपर्ने बजार - ग्रेनेले मार्केट छन्। यो रहनको लागि एक सभ्य ठाउँ हो, विशेष गरी यदि तपाईं बजेटमा हुनुहुन्छ भने।
राम्रो किनमेल र राम्रो दृश्य Vaugirard मा अवस्थित छ, तपाईं पार्क Andre Citroen र रु डु डु वाणिज्य भ्रमण गर्न चाहानुहुन्छ।
गर्नुपर्ने कामहरू: Grenelle बजार, Rue du वाणिज्य, पार्क Andre Citroen
बोईस को आर्क - 16th Arrondissement
16th धेरै कारणहरूको लागि एक उत्तम अरन्डीसेमेन्ट हो, बोइस दे बोलोन, म्यूजे मार्मोट्टन, र पक्कै पनि, आर्क डे ट्राइम्फ। सीन नदी नजिक हुँदा पनि चोट गर्दैन!
त्यस बाहेक, ट्रोकाडेरो पेरिसको सबैभन्दा आकर्षक स्थानहरू मध्ये एक हो, र यो 16th एररोन्डिसमेन्टमा छ। यद्यपि यो सब भन्दा टाढा तपाईको मध्य पेरिसमा प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यहाँ धेरै राम्रा होटलहरू छन् र विश्वको केही राम्रा रेष्टुरेन्टहरू 16th एरन्डिसेमेन्टमा।
गर्नुपर्ने कामहरू: ट्रोकाडेरो, असंख्य मिशेलिन स्टार स्टार रेस्टुरेन्ट, म्यूजे मार्मोट्टन
17th Arrondissement - जहाँ पेरिसियन्स घर कल
यदि तपाइँ पेरिसको ठाउँमा बस्न मन पराउनुहुन्छ जुन अलि बढी आराम र शान्त छ भने, 17th एक उत्तम विकल्प हो। त्यहाँ भयानक सडक बजारहरू, फ्रामागेरीजहरू, बुच्रीहरू र क्याफेहरू छन्। यहाँ खाना अद्भुत छ, किनकि यसले मिशेलिन रेस्टुरेन्टहरूको एक विशाल सूची समावेश गर्दछ, र राम्रो बुटीक होटलहरू - एकदम आवासीय क्षेत्रमा रहेको बावजुद।
गर्नुपर्ने कामहरू: पार्क मोन्सेउ
मोन्टमार्ट्रे - 18th Arrondissement
रमाईलो र आन्र्ची मोन्टमार्ट्रे पेरिसमा रहनको लागि उत्तम ठाउँहरू मध्ये एक हो, र तपाईंले विचार गर्न चाहानुहुन्छ। त्यहाँ गर्न केहि धेरै छ, धेरै धेरै हेर्न को लागी, र पहिले के गर्ने निर्णय गर्न तपाईलाई गाह्रो हुन्छ!
मौलिन रुज एक विशाल पर्यटक ट्र्याक हो, तर मोन्टमार्ट्रे यस्तो स्थान हो जहाँ तपाईले वास्तवमै केहि गर्नुपर्दैन। पेरिसको पहाडमा अवस्थित, तपाईं पेरिसमा हुँदा यो बस्नको लागि उत्तम क्वार्टरहरूमध्ये एक हो।
गर्नुपर्ने कामहरू: Sacre Coeur, मोन्टमार्टे, मौलिन रुज, डाली संग्रहालय
संगीत, विज्ञान र पार्क - 19th Arrondissement
19th एक उत्तम छिमेकमा रहनको लागि, ठीक केन्द्रीय नभए पनि। त्यो भनिएपछि, त्यो आंशिक कारण हो किन हामी सोच्छौं कि यो पेरिसमा बस्ने उत्तम स्थानहरू मध्ये एक हो।
त्यहाँ संगीत, प्रकृति, झरना, र राम्रो बुटिक होटलहरूको सजिलो पहुँच छ। तपाईं साईट दे ला म्यूजिक, पेरिस फिलहारमोनिक, र बट्स चामोन्ट भ्रमण गर्न चाहानुहुन्छ तपाईं पेरिसमा हुँदा अनुभवहरूको उत्कृष्ट मिश्रण प्रदान गर्न।
पेरिसमा कता बस्ने भनेर विचार गर्दा, यो एउटा अर्थिकरण हो जहाँ तपाईं बजेट र मध्य-दूरीका होटलहरूको एक राम्रो मिश्रण पाउन सक्नुहुन्छ।
गर्नुपर्ने कामहरू: साइट दे ला म्यूजिक, फिलहारोनी डे पेरिस, बुट्ट्स चामोन्ट
पेरे Lachaise र Belleville - 20th Arrondissement
जिम मोरिसन प्रशंसक, एकताबद्ध!
पेरे लाचाइस पेरिसको सबैभन्दा प्रख्यात चिहानको स्थान हो जुन फ्रान्सेली किंवदन्तीहरु जस्तै भिक्टर ह्युगो, चोपिन र मारी क्युरीको लागि अन्तिम विश्राम गर्ने ठाउँ पनि हो। Belleville एक विचित्र र राम्रो क्षेत्र हो, तर 20th रहन को लागी हाम्रो अधिक मनपर्ने क्षेत्रहरु मध्ये एक छैन। यो बस्ने ठाउँको लागि अत्यधिक मूल्य चुकाइएको छ, तर यो कब्रिस्तान हेर्न र बेल्भिलेमा एक गिलास वाइन राख्नु उपयुक्त छ।
गर्नुपर्ने कामहरू: पेरे लाचाइस कब्रिस्तान, बेल्लेभिले जिल्ला
एक आधिकारिक arrondissement होईन, ला डिफेन्स पेरिस मा एक आधुनिक व्यापार केन्द्र हो कि शहर को केन्द्र को एक सानो तर महत्वपूर्ण खण्ड फैलिएको।
त्यहाँ धेरै व्यवसायिक आगन्तुकहरू छन् जुन प्रत्येक वर्ष पेरिस आउँदछ, र यो जहाँ तिनीहरू मध्ये अधिकांश बस्छन्। व्यापारको वातावरणको ताकतमा, त्यहाँ धेरै उत्कृष्ट रेस्टुरेन्टहरू छन् - जसमध्ये धेरै उच्च अन्त्यमा केहि अगाडि छन्। एक महान मिशेलिन रेस्टुरेन्ट खोज्दै हुनुहुन्छ? यो सुरू गर्नको लागि राम्रो स्थान हो!
श्रेणी: आवास, युरोप, फ्रान्स, होटल, यात्रा योजना टैग: फ्रान्स, होटल, पेरिस, कहाँ बस्न
← स्यान फ्रान्सिस्कोमा सर्वश्रेष्ठ बार्स
पब र जैक को मार्गमा जानुहोस् लिपर लन्डनमा →